Tsena aty afrika : Manana ny anjar toerany i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaTsena aty afrika : Manana ny anjar toerany i Madagasikara
Nandritra ny famelabelarana izay notontosain’ny kaomisera misahana ny raharaha ekonomika eo anivon’ny vondrona afrikanina Victor Harison, no nanentanan’ity manam-pahaizana eo amin’ny sehatry ny toe-karena ity fa tsy misy afa-tsy ny vokatra voahodina ihany izay haondrana avy eo no hahatafavoaka ny firenena afrikanina eo amin’ ny lafiny ara-barotra sy fifanakalozana amin’ ny firenena hafa. Nambarany tamin’izany fa olan’ny firenena afrikanina ankehitriny ny fitsinjarana sy ny fitrandrahana araka ny tokony ho izy ny harena hananany, ankoatra izay hoy Victor Harison dia eo ny mikasika ny asa sy ny fampidiran-ketra……Noho izany dia manana tombony anefa isika, satria ny 7% ny fitombon’ny harinkarena aty Atsinanana dia ao anatin’ny vondrona misy antsika, kanefa na dia nisy aza ny fisondrotan’ny harinkarena de tsy voazara araka ny tokony ho izy izany hoy hatrany ny fanazavana izay nentiny.
Nandritra izany no nanazavan’ ity kaomisera misahana ny raharaha ekonomika eo anivon’ ny vondrona afrikanina ity, fa tokony hisy ny fahatsapan’ny vahoaka izany fisondrotana izany araka ny ezaka izay nataon’ny fitondram-panjakana, raha toa ka 2% ny tahan’ ny mponina eo amin’ ny firenena iray , dia tsy maintsy any amin’ny 6% any ho any ny harinkarena vao tsapan’ny vahoaka hoe niarina ny toe-kareny. Nanamarika tamin’ ny alalan’ ny fanazavany anefa i Victor Harison fa tsy tokony hisy ny fanomezan-tsiny mpitondra hoe misondrotra ny harinkarena nefa tsy tsapain-tanana izany, satria raha eo amin’ny 3% ny tahan’ny fisondrotana ara-toe-karena sy ny fitombon’ny mponina, dia tsy nizara io, ary io tsy manavaka satria dia misy ny manana , misy ny mahantra hita eto Afrika hoy izy. Ankoatra ny amin’izao hoy izy dia mbola betsaka ireo afrikanina no manana olana amin’ny fitadiavana asa , betsaka ihany koa ny tanora sy ny vehivahy dia ambany ny tahan’ny fampidiran-ketra, ary latsaky ny 25% ny harinkarena faobe manerana an’ Afrika iray manontolo.
Tao anatin’ny 10 taona, izany hoe ny 2004-2014 ,dia 5 % ny harinkarena afrikanina sy aziatika, ary ankehitriny dia efa nilaozan’ Azia isika , Eorôpa ary Amerika i Afrika … ho an’i Madagasikara manokana dia misandrahaka ny vokatra, ary ilaina ny fahaiza-mitantana sy mikaroka mba ahafahana mandroso. Anisan’ ny fanontaniana nipetraka nandritra ny famelaberana moa ny mikasika ny tsenam-paritra aty afrika, satria tokoa dia hatrany amin’ny 1 miliara mahery ny isan’ny Afrikanina, io tsena io dia vokatra avy any ivelany avokoa no tazana sy mitobaka, nefa dia vokatra aty amin’ny firenena afrikanina ihany no raisin’ ny avy any ivelany, dia ahodin’ izy ireo ary miverina aty Afrika indray dia isika no lasa mividy lafo. Noho izany dia nanambara i Victor Harison fa tonga ny fotoana ho an’i Madagasikara ny amin’ ny tokony hamokarana izay, ary raha ny tsara hoy izy dia efa tokony hiroborobo hatrany isika amin’izao fotoana izao. Ireo fanodinana rehetra ireo anefa dia tsy tontosa hoy ity manam-pahaizana amin’ny sehatra ara-toe-karena ity raha tsy eo ny lafin’ny herinaratra, isika anefa dia notahiana. Rano manana betsaka isika, manam-pahaizana injeniera maro, vokatra an-dranomasina sns….. ary nohariany tamin’ izany i Ethiopie izay niady an-trano sy nianjadian’ny tsy fahampian-tsakafo, nefa dia niara- nanapa-kevitra izy ireo hoe ‘ndao hiasa, ary homena sakafo ny mponina izay nitarika amin’ ny fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka. Notsindrian’ity manam-pahaizana manokana ity moa ho an’ i Madagasikara fa “raha samy vonona hiasa isika dia 3 taona dia tratra izany tanjona izany” . Noho izany hoy i Victor Harison, dia tokony hisy banky ho an’ny Malagasy mba hamatsiana ireo tetikasa amin’ ny fampandrosoana.